UMeme wam wokuqala. Kutheni ndibhala ibhlog yam. Yintoni imeme? | Iindaba zeGajethi
HBendicinga ukubhala malunga nenye into, kodwa ndiye ndabona ukuba uRogelio undidlulisele kwi-meme malunga nayo kutheni ndibhala ibhlog yam.
. Cnjani? awazi yintoni memeUfuna ntoni inkcazo yememe? Uxolo, kodwa ayizubakho. Abo batyelele le bhlog bayazi ukuba ndiyathanda ukucacisa indlela ezisebenza ngayo iinkqubo okanye indlela yokubhalisela iinkonzo ezahlukeneyo kwaye zenze kube lula ukuqonda amagama ahlukeneyo ekhompyuter asetyenziswa mihla le kwaye ayinguye wonke umntu owaziyo. Ngesi sizathu, njenganamhlanje kufuneka sithethe ngawo meme Ndingathanda ukukunika inkcazo yokuba yintoni i-meme, kodwa kuyacaca ukuba meme yenye yezo zinto, njengabanye abaninzi, ukuba kulula ukuyichaza ngemizekelo kunokuyichaza.
CNdiyakholelwa ukuba inkcazo yememe eyenzeka kwifayile ye- Wikipedia Kule meko, incinci okanye akukho nto inento yokwenza nokuqondwayo namhlanje kwi-Intanethi xa kubhekiswa kuyo meme. UVictor solano Uthi kwibhlog yakhe ukuba inkcazo esemthethweni ye-meme "intle kakhulu, kodwa usengozini yokulahleka kwipragmatism", nditsho ngakumbi, inkcazo yememe enikwe kwi-wikipedia ayicacanga kwaye ichaza umxholo ngohlobo, esivumele ukuba sibize into engeyiyo meme.
DI-Wikipedia ithi "ii-memes zivame ukuphindaphinda ngaphandle kokulandela nayiphi na injongo" kwaye kuyacaca ukuba kwii-memes ezisasazeka kwi-blogosphere bayayilandela injongo, kum eyona iphambili:
"Yandisa uthungelwano lweekhonkco phakathi kweeblogi"
TKuya kubakho abo baqala i-meme ukubona ukuba abantu bacinga ntoni ngesihloko okanye ukwanelisa umdla wabo wento malunga nento ethile, kodwa kuyo nayiphi na imeko eyona nto ibalulekileyo kukuba injongo iyalandelwa kwaye oku kuyaphikisana nenkcazo yememe .
DEmva koku kungasentla nangabo bangekafumani ukuba kwi-meme, okanye into esiyibiza ngokuba yi-meme, ndiza kukuxelela ukuba i-meme njengomdlalo we «uyithwala»Oko kukuthi, umntu othile udlulisa isihloko oza kubhala ngaso kwaye ubhale malunga naso emva koko usigqithisele komnye oya kuthi yena asigqithise komnye de i-meme iphelelwe ngamandla kwaye ilahleke elibeleni. Ngexesha lenkqubo, izimvo zabo bonke abo basasaza le meme ziya kwaziwa kwaye, ngokusisiseko, enkulu (okanye encinci ukuba i-meme ayinamkelekanga) iya kuba sisigcawu sewebhu esikwazi ukudibanisa amakhulu ebhloko.
BEwe, andisayi kuqengqeleka ngaphezulu kokulungileyo ukuze ndingagqithisi inqaku lemihla ngemihla; Njengoko isihloko sesithuba sitsho, yile meme yam yokuqala Kwaye ndiyathemba ukuba ayisiyiyo eyokugqibela njengoko ndiyithatha njengeyona ndlela ilungileyo yokudibana neeblogi ezintsha kwaye ndihlala ndikuthanda nokukhumbula enye. Ke ngaphandle kokulibaziseka ndiza kuyiphendula le meme, nangona emva kwexesha olifundileyo ndiza kuyenza ngokufutshane ukuze ndingaphindi ndikudike.
Kutheni ndibhala ibhlog yam:
ENdibhala le bhlog ngenxa yezizathu ezibini ezisisiseko:
1) Yonke imihla amakhulu (okanye amawaka) abantu aqhagamshela kwi-Intanethi okokuqala kwaye bafumanisa ukuba bafumana ilizwe elitsha elinokudideka kakhulu. Wonke umntu akanaye umhlobo oza kungqongwa ngemibuzo malunga nokuba yeyiphi le okanye yeyiphi kwaye kufuneka babuyele kutata Uphando ukusombulula amathandabuzo akho.
Kwaye nantsi enye ingxaki enkulu kum, benza ukukhangela kwabo kwaye bafumane amawaka okanye izigidi zeziphumo. Emva kokujonga ezimbalwa kubo, bayaqonda ukuba abasiqondi isiqingatha sezinto abathetha ngazo (Ndiyazi ukuba ndithetha ntoni kwenzeke kum kwaye iyaqhubeka nokwenzeka kum) kuba izihloko ezininzi zithathwa njengezingenamsebenzi. Mna Ndibhala le bhlog ukuzama ukucacisa inyathelo ngenyathelo ukuba inkqubo okanye inkonzo isebenza njani, ukuze ngaphandle kokushiya ibhlog inkcazo inokuqondwa kwaye uzame ukungathathi nasiphi na isihloko ngokungakhathali. Ndiyazi ukuba zikhona ezinye iisayithi apho oku kusenziwa khona, kodwa ndizama ukuyenza ngendlela emfutshane okanye enzulu (akumangalisi ukuba ndifumana isitena ngalo lonke ixesha ndithumela).
2) Endaweni ethile kwibhlog, andikhumbuli ngoku, ndatsho ukuba ngale bhlog ndibulala iintaka ezimbini ngelitye elinye. Kwelinye icala ndilahla oogxa bam ababuza ngale naleya. Ngoku xa bebuza, ndibathumela kwibhlog kwaye ukuba kunyanzelekile ndibhale inqaku malunga nombuzo wabo. Ngale ndlela, elandelayo ndiyabuza, kufuneka ndiyithumele kwibhlog.
Enye into kukuba iyandisebenzela njenge Zintathu, kuba ndigcina onke amaqhinga endiwafundayo kwaye ndinokufikelela kuwo nakweyiphi na ikhompyuter enonxibelelwano lwe-Intanethi.
PYiloo nto, intetho engaka malunga noku? Ewe ngoku kufuneka ndigqithisele abanye abantu kwaye ndiyathemba ukuba bayaqhubeka nokusasaza njengentsholongwane. Ndidlulisela imeme ku UPaul no-Icarus, i Psiko, apho ndinetyala khona kwiposti, ukuya Miguel sele sele Arturo. Imibuliso yeVinegary.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » UMeme wam wokuqala. Kutheni ndibhala ibhlog yam. Yintoni imeme?
Enkosi ngokudlulisa ubungqina kum, ndiyakulandela ngovuyo.
Ndiyabulela kakhulu. Nangona sekuphantse kwaqengqeleka iminyaka emi-3 usenzile esi sithuba, namhlanje ndidibene naye, ndikhangele ngqo ukuba, yintoni imeme?
Ewe iluncedo kakhulu. Ngendlela endiyifumene ngayo nebhlog yakho.